Onye na - eme mmiri mmiri duc Olee otú o si arụ ọrụ? • Etu esi ehicha? • Olee otú ịtọ?
Onye na - eme mmiri mmiri, onye na - emezi ihe na - eji ya na mmiri ya. Mgbanwe mgbanwe mmiri ime na sistemụ mmiri na - ebutekarị, n’etiti ndị ọzọ, site na sistemụ mmiri na - ezighi ezi ma ọ bụ na - eme n'abalị, mgbe mmiri na - erughị ala na - eme ka nrụgide ya na nsị, nke nwere ike imebi usoro na ngwaọrụ ejikọtara ya, ma na - ekpughe onye ọrụ maka ụgwọ ndị na - enweghị isi.
Wụnye ihe nrụgide mmiri ga-ebelata nrụgide ọkọnọ nke dị oke elu, debe nrụgide nke sistemụ ahụ mgbe niile, yabụ ma ọ bụrụ na mgbanwe mmiri ọkụ mmiri, na-enye aka ịchekwa mmiri site na igbochi oke mmiri ya, kpochapụ ihe ize ndụ nke hama mmiri ma belata mkpọtụ na mkpọtụ na-eme n'oge arụ ọrụ nke usoro mmiri.
A na-etinye ndị na-ahụ maka mmiri mmiri n'azụ mita mmiri i nyo mmiri n’elu eriri ike. Enwekwara ike itinye ha na mpaghara na ọkpọkọ nke ebe a na-egwu mmiri na tankị, mana a na-eji ihe ngwọta a naanị mgbe ịnweta isi njikọ adịghị.
A na-etinye ya n’elu ma na-esote onye na-achịkwa ya mechiri emechi, na-eme ka ọnọdụ ya na mmezi ya na-esote. Ngwaọrụ etinyere n’akwụghị ọtọ.
Lee kwa: Mmiri elektrik
Enwere ike itinye ihe nrụgide mmiri na ebe dị iche iche nke usoro mmiri:
nzukọ etiti - mgbe mmiri mmiri, valvụ isi na iyo n’elu eriri ike. N'oge nnọkọ, cheta maka mpaghara mmiri ahụ na-eme ka mmiri dị jụụ na - etinye ihe na - akpata nrụgide. Tọ ntọala dị ala maka sistemụ ahụ dum na-azọpụta mmiri.
nzuko - n’elu ebe a na-enweta mmiri nke na-eme ka mmiri dị na mmiri na ebe a na-echekwa mmiri, mgbe ebumnuche nke ịwụnye onye na-ahụ maka mmiri bụ iji zere imeghe valvụ nchekwa ma ọ bụrụ na mgbanwe na-arụ ọrụ. Nke a na-enye ohere ka ịgbanyụọ ugboro ugboro na-agbanye mgbụ ọkụ.
ndọpụ uche - naanị na mpaghara ebe a na-esi mmiri ọkụ ma jiri isi na thermostats mee ihe n'otu oge. Ihe mgbagwoju akwa nwere ike ịpụta ebe a, nke ga - eme ka ị ghara ịhapụ valvụ nchekwa. N'okwu a, ndị na-ebelata nrụgide ga-edozi mmiri nke mmiri ọkụ na mmiri oyi.
- n'usoro ọkọnọdịka ọmụmaatụ ụlọ dị elu, site na sistemụ nrụgide, ebe achọrọ mpaghara nrụgide ndị ọzọ. A na-eji ndị na - eme mmiri na - ebugharị mmiri mgbe ike nkwụghachi na nrụnye gafere 5 mmanya ma ọ bụ mgbe nrụgide dị na elu nke valvụ nchekwa (dịka ọmụmaatụ mmiri mmiri) gafere 80% nke nrụgide mmeghe ya.
Ekwesịrị imeghari mmiri mmiri n'ime ọkpọkọ ka ikike nke ngwaọrụ na sistemu gụnyere na ntinye mmiri. Mmetụta mmiri dị oke nwere ike ibute mmebi ma ọ bụ juputa sistem ahụ, yabụ etinyere onye na-ahụ maka nrụgide mmiri na mmiri.
Ihe otu onye na - atụgharị akwụkwọ ọ bụla si dị iche akpụkpọ ahụ Ọ bụ maka otu onye nrụgide mmiri si arụ ọrụ n'ime sistemụ mmiri.
Mgbe oke ike jet mmiri na-eme akpụkpọ ahụ na mbelata, a na-ebuli mmiri mmiri, nke na-abawanye akara ma na-enye ohere ịnweta nrụgide mmiri achọrọ. Mgbe nrụgide dara n'okpuru ọkwa setịpụrụ, oge opupu ihe ubi ahụ na-ada, na-ekwe ka mmiri na-asọ.
E nwere ụzọ dị iche iche, dịkarịsịrị mgbagwoju anya, ejiri rụọ ọrụ n'ahịa mana site na nyocha rụkpụrụ nchịkwa mmiri na-eduzi mmiri nke ọ bụla enweghị ike ịgbanwe agbanwe: diaphragm, akara na valvụ na-arụkọ ọrụ iji mee ka nrụgide ọpụpụ dị mma.
Ọtụtụ mgbe, ịzụta onye na-ahụ maka mmiri mmiri na-aghọ ihe dị mkpa, n'ihi na ojiji ya na-echebe sistemụ mmiri site na mmebi nke oke nrụgide kpatara yana ọ bụ ụzọ iji belata nsị mmiri na sistem.
Lee kwa: Igwe mmiri
A na-eji mmiri nrụpụta mmiri mgbe:
sistemu sistemu sistemụ na-arụ ọrụ karịrị ikike kwere
mgbali elu nke valvụ nchekwa ahụ karịrị 80% nke nrụnye oghere valve
oge iji ihe ọkụkụ ahụ nwere ike ibute oke ihe ọkụkụ na-adịru nwa oge
izu ike na nwụnye karịa 5 mmanya
Ndị na-ahụ maka mmiri nrụgide mmiri dị mma ebe nrụgide netwọk dịnụ (Mmiri) dị oke elu maka ihe ọkụkụ ma ọ bụ akụrụngwa ma ọ bụ na-emetụta mgbanwe oge.
Lee kwa: Igha osmosis
Na ire i ere i nwere ike icho ngwaọrụ nke ihe di iche iche emebere.
Ntughari kadi O nwere aru nke ọla na njikọta ya na ihe ndoro-ndochi nke nwere ihe ndozi na akara. Ihe okike a na-enye ohere ka iwepu ihe ntinye ahu na mgbochi nchebe maka ihicha. Usoro mmiri na-ebelata mmiri na - ebugharị dị n'ime katriiki, yabụ mmezi agaghị agbanwe ọnọdụ nrụgide.
igwe anaghị agba nchara Ha anaghị egbochi usoro corrosion karịa ka ihe ndị na-akụ ọla. Nke ikpeazụ a dị oke ọnụ karị, mana ọ ga-arụ ọrụ nke ọma na oke mmiri.
1 inch mgbali mmiri reducer, ¾ reducer ma ọ bụ 1/2 mgbali mmiri reducer ahọrọ na-adabere na dayameta nke ọkpọkọ ọkọnọ. Ọnọdụ nke ndị belata obere bụ otu ihe ahụ gbasara ndị nke buru ibu, ahọpụtakwa nke ọma na ha ga-anọ ọtụtụ afọ.
mmiri na-ebugharị mmiri na mmiri ọ bụ ezigbo ezigbo ngwọta na nrụnye na-enweghị nzacha ndị ọzọ. Nsacha ọ bụla ejiri ihe na-echebe nrụnye ahụ na mmebi ahụ ma ọ bụrụ na ọ mebie, ngbanwe nke onye na-atụgharị akwụkwọ ahụ dị mfe ma dị ọnụ ala karịa karịa iwepu ọdịda na ntinye mmiri niile ma ọ bụ dochie ngwaọrụ ndị dị na ya. Ọ dị mkpa na a na-ehicha ya mgbe niile na ntinye ntinye arụ ọrụ dị na ntanetị nke ndị na-ahụ maka mmiri.
idegharị mmiri na - ebugharị mmiri wuru n'ime ma ọ bụ mpụga na-eme ka ọ dịkwuo mfe iji ma na-abawanye mma nke iji usoro mmiri, na-enye ngwa ngwa ọgụgụ nke nrụgide dị na sistemụ mmiri.
onye na - ebugharị mmiri na - enyocha mmiri na nrụgide bụ ihe ngwọta zuru oke ma dịkwa mma iji.
Dị ndị na-akwụ ụgwọ dị ọnụ ala nke ndị na-achịkwa nwere nrụpụta nke nrụpụta. Ọ bụrụ n ’ịhọrọ ụsọ mmiri dị oke ọnụ karịa, ị nwere ike iji aka dozie ma gbanwee pọọsụ ngwaọrụ ahụ.
Lee kwa: Onye na-a drinkụ mmanya
castorama mmiri nrụgide reducerotu onye nrụgide mmiri si arụ ọrụotu esi ehichaa mmiri nrụgide mmiriotu esi emeghari nrụgide mmiriotu esi etinye mmiri nrụnye mmirikedu ihe mmetuta mmirinrụgide idegharị mmirionye na - eme mmiri mmirimmiri nrụpụta 1 anụ ọhịaOnye na-ahụ maka mmiri dị mmiri 1/21/2 inch mmiri nrụgide nrụgideOnye na-agba mmiri mmiri dị inch 2Onye na-ahụ maka mmiri dị mmiri 3/43/4 mmiri nrụgide mmiri nwere nrụgidecastorama mmiri nrụgide reducerọnụahịa mgbakeghachi mmirinhicha mmiri nrụgide mmirionye na-agba mmiri mmirimmiri mgbanye rezighaz herzmmiri nrụgide rezite herz reviewsmmiri na -eme ka mmiri na-ebu mmirihoneywell mmiri nsogbu reducer akwụkwọ ntuziakaakwụkwọ ntuziaka ntughari ntuziakaka onye na - eme mmiri mmiri si arụ ọrụonye na - azụ mmiri mmiri na - eme ka ịhazie yaotu esi etinye mmiri nrụgide mmirimmiri mmuta mmeri merlin reducermmiri reducer obimmeghari mmiri nhazigharị mmirimmiri na-ebugharị mmiri na mmirionye na - ebugharị mmiri na - enyocha mmiri na nrụgideidegharị mmiri na - ebugharị mmirimmiri nrụgide reducer ụkpụrụ ọrụ